ỊWỤNYE PHP NA UBUNTU SERVER - LINUX - 2019
PHP Ntuziaka Nduzi maka Ubuntu Server
Ndị mmepe weebụ nwere ike ịnwe nhịahụ ntinye ederede PHP na Ubuntu Server. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe. Mana iji ntuziaka a, onye ọ bụla nwere ike izere imehie n'oge echichi.
Tinye PHP na Ubuntu Server
Ịmepụta asụsụ PHP na Ubuntu Server nwere ike ime n'ụzọ dịgasị iche - niile dabere na mbipụta ya na mbipute sistemụ ahụ n'onwe ya. Ihe dị iche iche dị na ìgwè dị iche iche, nke ga-adị mkpa ịrụ.
Ọ dịkwa mma ịchọta na ngwà ngwugwu gụnyere ọtụtụ components na, ọ bụrụ na achọrọ, nwere ike ịmebe iche iche site na ibe gị.
Nzọụkwụ 1: Ntọala Ụdị
Ntinye nhazi gụnyere itinye akara ọhụrụ nke ngwugwu ahụ. Onye ọ bụla sistemụ arụmọrụ Ubuntu Server ọ bụ dị iche iche:
12.04 LTS (Kwesịrị Ekwesị) - 5.3;
14.04 LTS (Tụkwasịrị Obi) - 5.5;
Ọkt 15 (Wily) - 5.6;
A na-ekesa nchịkọta niile site na nchịkọta ọrụ nke sistemụ arụmọrụ, yabụ ị gaghị mkpa ijikọta ndị ọzọ. Ma echichi nke ngwugwu zuru ezu na-arụ na nsụgharị abụọ ma dabere na mbipute Os. Ya mere, itinye PHP na Ubuntu Server 16.04, na-agbaso iwu a:
sudo apt-nweta wụnye php
Na maka nsụgharị mbụ:
sudo apt-nweta wụnye php5
Ọ bụrụ na ịnweghị ngwà niile nke ngwanrọ PHP na usoro ahụ, ị ​​nwere ike iwunye ha iche iche. Otu esi eme nke a na ihe iwu maka mkpa a ime, a ga-akọwa ya n'okpuru.
Apache Server Server Module
Iji wụnye PHP modul maka Apache na Ubuntu Server 16.04, ịkwesiri ịga iwu na-esonụ:
sudo apt-nweta wụnye libapache2-mod-php
Na nsụgharị nke OS:
sudo apt-nweta wụnye libapache2-mod-php5
A ga-ajụ gị maka paswọọdụ, mgbe ị banyere nke ị ga-enye ikikere maka nwụnye. Iji mee nke a, tinye akwụkwọ ozi ahụ "D" ma ọ bụ "Y" (na-adabere na ịwapụta nke Ubuntu Server) wee pịa Tinye.
Ọ na-anọgide na ichere maka ịmecha nbudata na ngwugwu ngwugwu.
Iji wụnye module FPM na sistemụ arụmọrụ 16.04, mee ihe ndị a:
sudo apt-nweta wụnye php-fpm
Na nsụgharị mbụ:
sudo apt-nweta wụnye php5-fpm
Na nke a, nkwụnye ahụ ga-amalite na akpaghị aka, ozugbo ịbanye na paswọọdụ superuser.
CLI dị mkpa maka ndị mmepe na-etinye aka na mmepụta ihe omume console na PHP. Iji tinye otu asụsụ mmemme ahụ, na Ubuntu 16.04, ị ga-agbanye iwu ahụ:
sudo apt-nweta wụnye php-cli
sudo apt-nweta wụnye php5-pịa
Iji mezuo ọrụ nile nke PHP, ọ dị mkpa iji wụnye ọtụtụ ntinye maka mmemme eji. Ugbu a, iwu ndị kachasị ewu ewu maka ịrụpụta ihe dị otú ahụ ga-eweta.
Rịba ama: a ga-enye ndị na-esonụ maka ndọtị ọ bụla na iwu abụọ, ebe mbụ bụ maka Ubuntu Server 16.04, nke abụọ bụ maka nsụgharị OS.
Mgbatị maka GD:
sudo apt-nweta wụnye php-gd
sudo apt-nweta wụnye php5-gd
Mgbatị maka Mcrypt:
sudo apt-nweta wụnye php-mcrypt
sudo apt-nweta wụnye php5-mcrypt
sudo apt-nweta wụnye php-mysql
sudo apt-nweta wụnye php5-mysql
Hụkwa: MySQL nwụnye Ntuziaka maka Ubuntu
Nzọụkwụ 2: Wụnye Nsụgharị Ndị Ọzọ
N'elu ya, e kwuru na ụdị nke Ubuntu Server ga-arụnye ngwugwu ngwugwu PHP. Ma nke a anaghị egbochi ịbịnye nke mbụ ma ọ bụ, kama nke ahụ, nsụgharị nke asụsụ mmemme.
Mbụ ị ga-ewepụ ihe niile PHP a rụpụtara na usoro ahụ. Iji mee nke a na Ubuntu 16.04 na-agba ọsọ abụọ iwu:
Ugbu a ịkwesịrị ịgbakwunye PPA na ndepụta nke repositories, nke nwere nchịkọta nke nsụgharị PHP niile:
N'oge a, i nwere ike iwunye ngwugwu PHP zuru ezu. Iji mee nke a, n'ime otu onwe ya, dee ụdị ya, dịka ọmụmaatụ, "5.6":
sudo apt-nweta wụnye php5.6
Ọ bụrụ na ịnweghị ngwugwu zuru ezu, ịnwere ike ịwụnye modulu ahụ iche iche site na ịmepụta iwu ndị dị mkpa:
sudo apt-nweta wụnye libapache2-mod-php5.6
sudo apt-nweta wụnye php5.6-fpm
sudo apt-nweta wụnye php5.6-pịa
sudo apt-nweta wụnye php5.6-mbstring
sudo apt-nweta wụnye php5.6-mcrypt
sudo apt-nweta wụnye php5.6-mysql
sudo apt-nweta wụnye php5.6-xml
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwu na, ọbụna nwere ihe ọmụma dị mkpa banyere ịrụ ọrụ na kọmputa, onye ọrụ nwere ike ịwụnye ma ọ bụ isi ngwungwu PHP na ihe niile ọzọ. Ihe bụ isi bụ ịmara iwu ndị ị chọrọ iji na-agba ọsọ na Ubuntu Server.